Xog: Maamulka G/Banaadir oo arday badan iskuullada ugu eryey sabab yaab leh | Warkii.com
Home warkii Xog: Maamulka G/Banaadir oo arday badan iskuullada ugu eryey sabab yaab leh
Xog: Maamulka G/Banaadir oo arday badan iskuullada ugu eryey sabab yaab leh
Maamulka Gobalka Baanadir ayaa billaabay in ay Iskuulada ka ceyriyaan tobaneeyo kamid ah Ardayda Class-ka 4-aad ee Dugsiga sare kadib markii la sheegay in ay ku dhaceen Imtixaanka tijaabada ah ee Bilaha ah, kaas oo lagu tijaabiyo heerka aqoonta ardayga cashiradii ugu dambeeyay.
Imtixaanka Bilaha ah oo todobaadyo ka hor soo dhamaaday ayaa la sheegay in dhamaan Ardayda dhacday islamarkaana dhigta Iskuulada dowladda ee dhowaan lagu wareejiyay dowladda Hoose ee Xamar la eryay, halka kuwa natiijada hoose ku baasayna loo sheegay waalidiintooda si bisha dambe is-badal wanaagsan la yimaadaan.
Sidoo kale Imtixaanka Bilaha ah ee dhowaan qabsoomay ayaa tijaabo u ahaa heerka fahamka ardayga ee Manhajka cusub ee dowladda oo sanad dusgiyadeedkan si rasmi ah u bilaawday.
Arrintaan ayaa dowladda kaga golleedahay sida la tilmaamay in ay yareyso ardayda ku dhaceysa imtixaanka shahaadiga ah maadaama sanadkii lasoo dhaafay Arday farabadan ay ku hoobteen imtixaankii la qaaday, kuwaas oo u badnaa arday reer Muqdisho ah, taasi oo ka careysiisay shacabka.
Sidoo kale maamulka gobalka Banaadir ayaa la sheegay in ay diyaarinayaan arday aqoon leh oo ka bixi karta Imtxiaanka Qaranka islamarkaana ardayda ku harta Imtixaanka Bilaha ah laga reebi doono Imtixaanka Guud ee Qaranka, si aysan ceeb kale ugu soo hoyan gobolka.
Arintaan ayaa aad loo hadal haayaa goobaha Waxbarashada, waxaana la sheegay in ay hadda socoto doodo arrintaan ku saabsan oo ay waalidiintu ku codsnayaan in markaan loo fasaxo si ay ugu cadaadiyaan in bisha dambe aysan dhicin.
Previous articleDr Cismaan Dufle oo Caawa isku day dil ka badbaaday
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo ka hor-timid guddiyada doorashada kadib markii ‘lagu soo daray’ xubno…
Because it is purely fictional, the concept of the nigo concept known as "The Force" is based on some real principles. In the Star...
Ururada bulshada rayidka ah oo walaac xoogan ka muujiyey doorashooyinka
Madaxweynaha Tigrayga oo hadal lama filaan ah kasoo saaray dagaalka